ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်မည့် ယောဂကျင့်စဉ်
ရေးသားသူ may16 at Friday, July 02, 2010
ညအလင်္ကာ July 2, 2010 at 11:12 PM
နေ၀သန် July 3, 2010 at 5:35 AM
မှတ်ထားမယ်.. ခက်တာက ကျွန်တော်က ၀မ်းချုပ်တတ်တဲ့အကောင်မဟုတ်ပဲ အားအားရှိ အိမ်သာမျက်စောင်းထိုးနေတာဆိုတာ... ဒီလို ခဏခဏသွားတဲ့ ၀မ်းကို ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဗျားးးးးးး... ဟားဟား.... ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေလာပြောနေသလိုဖြစ်နေပြီ...း))))
Meengelay July 3, 2010 at 8:21 AM
ရေသန့်July 3, 2010 at 1:06 PM
ကျေးဇူးပဲ ခေါင်းမခဲတော့ ဘူး
kokomaung.uk July 3, 2010 at 3:54 PM
လေ့ကျင့်ကြည့်ဦးမယ်။ အဲဒီလို လေ့ကျင့်တာကိုက လေလည်ချင်စရာကြီး။းဝ)
Welcome July 5, 2010 at 3:38 PM
တစ်ခါမှမချုပ်ဖူးတော့ ချုပ်ကြည့်အုန်းမှ ...
YoungGun July 6, 2010 at 9:22 PM
ဒီဆောင်းပါးကတော့ အကျိုးရှိပဗျာ။။ ကိုယ့်ဝန်းကျင်က လူတွေကို လက်တို့လိုက်ဦးမယ်။
naylin October 22, 2010 at 5:47 PM
ကောင်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်က ရာဂ ကိုဝါသနာပါတယ်ဗျ
နောက်လည်း ဆက်လက်ပြီး ပညာလေးပေးပါအုံးဗျာ
ရာ ဂ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ယောဂ (yoga) ပါ ဒွတ်ခပဲ တလွဲတေဖြစ်ကုန်ပီ
အောင်ဒင် March 31, 2011 at 3:28 PM
Thanks. hope it works. let me try it.
current recipe for me is either eat papaya or smoke haha
၀ါဆို May 27, 2011 at 9:29 AM
၀မ်းချူပ်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ ဟုတ်ပါပြီ...၀မ်းလွယ်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်းတင်ပေးပါအုံး..ကျေးဇူးပါ
mimyat darli September 2, 2012 at 9:23 PM